I-Lactalbumin, ekwabizwa ngokuba yi "whey protein", yi-albhamuin equlathe ubisi kwaye ifunyenwe kwi-whey. ILactalbumin ifunyanwa kwi… ..
Aukuguquka I-alpha lactalbumin powder isetyenzisiwe ekutyeni, isongezelelo, ikhefu lobisi.
I-Lactalbumin, ekwabizwa ngokuba yi "whey protein", yi-albhamuin equlathe ubisi kwaye ifunyenwe kwi-whey. ILactalbumin ifumaneka kubisi lwezilwanyana ezininzi ezanyisayo. Kukho ii-alpha kunye ne-beta lactalbumins; Zombini ziqulathwe lubisi.
Iiprotheyini ze-Whey ziphezulu kwii-EAAs, ezisithoba ezingama-20 zee-amino acid ekufuneka zivela ekudleni ngenxa yokuba umzimba awukwazi ukuzenza. Ngaphaya koko, ii-BCAAs, ngokukodwa i-leucine, idlala indima ethe ngqo ekuqaliseni ukuhlanganiswa kweprotein yemisipha.
I-Alpha-lactalbumin njengomthombo weprotini inyusa amanqanaba e-tryptophan yegazi, ekhuthaza ukuhlanganiswa kunye nokufumaneka kwe-serotonin kwingqondo. Kwelinye icala, i-serotonin ixhasa ukuveliswa kwe-melatonin, ihomoni enceda ekulawuleni iipateni zokulala. I-Serotonin ineziphumo ezininzi kwaye iyanyanzelwa kulawulo lokutya, imood, ukulawulwa kokulala, ukusebenza kwengqondo kunye nokukwazi ukumelana noxinzelelo.
Ukuthelekiswa kokulandelelana kwe-amino acid yenkomo ye-alpha-lactalbumin kunye neenkukhu zeqanda elimhlophe lysozyme. UK Brew et. Al Ijenali yekhemistri yebhayoloji, 242 (16), engachazwanga (1967-8-25)